समाचार Archives - Page4of5- samachar
Home > समाचार (Page 4)
samacharpostdainik April 11, 2022 समाचार	0
भारतको बिहारमा लुटेराहरूको समूहले ६० फिट लामो फलामे पुल नै चोरी गरेको छ । बिहारको रोतस जिल्लास्थित ४५ वर्ष पुरानो पुललाई उनीहरूले फुकालेर चोरी गरेका हुन् । स्थानीयहरूका अनुसार लुटेरा समूहले स्थानीय अधिकारीहरूलाई झुक्याएर तीन दिन लगाएर उक्त पुल चोरेको थियो । उनीहरूले आफूलाई सिंचाइ विभागका अधिकृत भएको भन्दै झुक्याएर पुल चोरेका
गाउँमै पाइने दूधे झार का यति धेरै चमत्कारी फाइदा सामान्य जरो देखि ठूलो रोग पनि हुन्छ निको । अहिले मानिसहरु चिकित्स उपचार पद्धतिमा मात्र भर नपरी आयुर्वेदिक पद्धतिइ पनि अगालिरहेका छन् । किन भने चिकित्सा पद्धतिका धरै साइड इफेट रहेको हुन्छ त्यसैले बजारमा अहिले थुपै जडिबुटी औषधि पाइने गर्दछन। आज हामी तपाइलाई
वि’वाहपछिको सुखद् स’म्बन्धको लागि प्रे’मी-प्रे’मीकाको बुझ्नु पर्ने बानीहरू !
samacharpostdainik April 10, 2022 समाचार	0
तपाईं अक्सर सुन्नुहुन्छ कि प्रेम वि’वाह मागी वि’वाहको तुलनामा छोटो समयको लागि हुन्छ । विभिन्न अध्ययनबाट प्राप्त तथ्यांक अनुसार ४० प्रतिशतभन्दा बढी केसमा यो सत्य पनि देखिएको छ । अमेरिकामा गरिएको एक सर्वेक्षण अनुसार ४० प्रतिशत प्रेम वि’वाह गरेका जोडीहरु विश्वास गर्छन् कि वि’वाहपछि प्रेमी वा प्रेमिकाको व्य’वहार परिवर्तन हुन्छ । यदि तपाईं
हेर्नुहोस त बाटोमा बसेका कुकुरले मान्छे खान थाले
samacharpostdainik April 9, 2022 समाचार	0
काठमाडौं :भारतको उत्तर प्रदेश (यूपी) मा फेरि एक पटक दर्दनाक घटनामा कुकुरको संलग्नता पाइएको छ । त्यहाँ कुकुरले पाँच वर्षकी एक बालिकालाई सि’का’र बनाएको छ । यस घटनापछि स्थानीय स्तरमा आ’तंक फैलिएको छ । यसैगरी हापुुडको जनपद निवासी एक व्यक्ति जेपीनगरस्थित ससुराल गएका थिए, जहाँ भुस्याहा कुकुरको आ’क्र’म’णमा उनका ९ वर्षीय छोराको
४० यात्रुको ज्यान बचाए ब्रेक फेल भएको बसका सहासिक चालकले..
अर्घाखाँची – शुक्रबार बिहान करिब ११ बजेको थियो। पोखराबाट भ्रमणका लागि निस्किएको ग १ ख ६८० नम्बरको बस २७ जना यात्रु बोकेर सन्धिखर्क नगरपालिका-२ भलायडाँडाको ओरालो झर्दै थियो। २३ गते पोखराबाट प्रस्थान गरेका यात्रुहरू बोकेर हिजो प्युठानमा रहेको ऐतिहासिक स्वर्गद्वारी मन्दिर दर्शन गरी आज सुपा देउराली मन्दिरमा पुग्ने अनि आजको रात
मोटरसाइकल ठेलागाडा संग ठोकिदा एक जनाको मृत्यु
samacharpostdainik April 8, 2022 समाचार	0
भरतपुर महानगरपालिका–७ स्थित हेल्थपोष्ट चोकदेखि प्रेमबस्ति चोकतर्फ जाँदै गरेको बा ६३ प ७४०६ नम्बरको मोटरसाइलकल अनियन्त्रित भई ठेला गाडा र स्कुटरमा ठोक्किन पुग्दा मोटरसाइकल चालकको मृत्यु भएको छ । तीव्र गतिको मोटरसाइकलले अनियन्त्रित भएर दूध बोकेको ठेलागाडा र रोकिराखेको बागमती प्रदेश ०३–०४ प ५३२० नम्बरको स्कुटरलाई ठक्कर दिएको थियो । मृत्यु हुनेमा
samacharpostdainik April 7, 2022 समाचार	0
दाङ – भीरबाट ख’सेर प्रहरी जवानको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा इप्रका शीतलपाटीमा कार्यरत प्रहरी जवान पवन केसी रहेका छन् । उनको शीतलपाटी नजिकैको भी’रबाट ख’से’र मृत्यु भएको सल्यान प्रहरीले जनाएको छ । ड्युटीमा नभेटेपछि रातभर उनको खोजतलास गर्दा ५० मिटर तल उनलाई मृत अबस्थामा पेला पारिएको बताइएको छ । ड्युटी
काठमाण्डौबाट छुटेको बस धादिङमा दुर्घटना, १५ जनाको कस्तो छ अवस्था ?
काठमाडौं, चैत २४ – देशको विभिन्न स्थानमा भएका सवारी दुर्घटनामा ६ जनाको मृत्यु भएको छ । काठमाडौं, ललितपुर, चितवन, झापा, पर्सा र काभ्रेमा भएको सवारी दुर्घटनामा उनीहरुको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका–१३ सोल्टि दोबाटोमा बा १७ च ४९०३ नम्बरको भ्यानले प्र ३ ०२–०२८ प ७५२१ नम्बरको मोटरसाइकललाई बुधबार ठक्कर दिँदा
यु,व,तीहरु यस कारण आफु भन्दा बढी उमेरका पु-रुषसंग हुरुक्कै हुन्छन ( जानी राखाैँ )
यु,व,तीहरु यस कारण आफु भन्दा बढी उमेरका पु-रुषसंग हुरुक्कै हुन्छन ( जानी राखाैँ ) हरेक महिला आफ्नो पा’र्टनर आफुले सोचे जस्तो होस् आफुलाई माया गर्ने ! आफुलाई बुझ्ने खाल को होस् भन्ने चाहान्छन त्यसैले युवतीहरु आफु भन्दा अलि बढी नै उमेर भएको पुरुष लाइ मन पराउने गर्दछन तर कोहि युवती भने
श्रीमान कतारमा छन्, दुई वर्षका छोराको कारले ठ,क्क,र दिएर मृ,त्यु भयो दुई दिन देखि आमा बे,हो,स्
काठमाडौ । श्रीमान वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशमा छन् । रामेछाप मन्थली नगरपालिकाकी ९ घर भई लुभुमा बस्दै आएकी बिमली दुई छोरासंग थिइन् । उनको जेठो छोरा ५ वर्षका थिए भने दुई वर्षका छोरालाई यहि वैशाखमा विद्यालय भर्ना गर्ने योजना थियो । तर त्यो योजना अब कहिल्यै पुरा हुन नपाउने भयो । उनका दुई
असाध्यै बोल्ड टिकटकमा भाइरल मोडल सायोमा लिम्बु ! हेर्नुहोस् तस्वीरहरु‘
महिलाहरुले आफुलाई चाहना भए पछि यस्तो व्य’वहार देखाउँछिन् ! जानी राखौं